UkuThengiswa kweWebhu: Ungatolika njani amaxabiso eBounce kuGoogle Analytics
Ngu-John Arnold, Michael Becker, Marty Dickinson, Ian Lurie, Elizabeth Marsten
Abathengisi bewebhu banokuqhubeka nokulinganisa umgangatho wokundwendwela kunye izinga lokubhabha. Ukuqhuma kwenzeka xa umntu etyelela elinye iphepha lewebhusayithi yakho aze ahambe ngaphandle kokucofa kwamanye amaphepha.
Kwintengiso ye-Intanethi, izinga lokubhabha inokubhekisa kwizinto ezimbini ezahlukeneyo. Njengoko isetyenziswe apha, izinga lokubhabha Kuthetha inani labantu abatyelela indawo yakho, jonga iphepha elinye, emva koko bashiye ngaphandle kokucofa elinye iphepha. B izinga ounce Kananjalo kunokuthetha ukuba i-imeyile ethunyelwe kuluhlu ayinakufikelela kumamkeli.
Zombini zisetyenzisiwe ngokuchanekileyo. Nanini na xa ubona izinga lokubhabha kwingxelo yezithuthi, nangona kunjalo, ibhekisa kwinqanaba lokuhlawula malunga nokuhlaziywa kwewebhu.
Idatha yenqanaba lokuhlawula, ikuxelela ipesenti yeendwendwe ezibhabha kwiphepha elithile. Unokufumana idatha yenqanaba lokuhlawula uninzi lweengxelo zomxholo. Khetha uMxholo → Umxholo weSiza njengesiqalo.
Ireyithi yokubuyisa yenye indlela yokugweba umgangatho wokundwendwela. Iyakubonisa
Amaphepha abagxotha nje abantu
Amaphepha atsala iindwendwe ngakumbi kwindawo yakho
Okona kubaluleke kakhulu, iingxaki zokufika kwamaphepha
Ulihlalutya njani iphepha lakho lasekhaya
Ireyithi yokubuyisa linani elikhulu lokuhlalutya iphepha lakho lasekhaya. Ngaphandle kokuba unayo iphepha elinamaphepha elinye, kunokwenzeka ukuba ufuna ezantsi kwinqanaba lokuhlawula kangangoko kunokwenzeka. Ingxelo elandelayo ibonisa ukuba utshintsho oluncinci kumxholo wekhasi lasekhaya kunye nolwakhiwo lunokuchaphazela njani inqanaba lokuhlawula.
Njengoko usongeza izinto ezinomdla kwiphepha lakho lasekhaya, unokubona isiphumo esenziwe ngala mabali kwinqanaba lokuhlawula. Oko kukuthi, kukuxelela into abaphulaphuli bakho abayithandayo okanye abangayithandiyo kwaye banokufunda kuyo.
Sukusebenzisa isantya sokuxhamla kwisithuba. Jonga ixesha kwindawo yakho, kwaye ucinge ngento eyenziwa yindawo yakho. Ngamanye amaxesha, inqanaba lokubhabha eliphezulu lilungile.
Ukuba unayo ibhlog, umzekelo, abafundi abaninzi baya kulahla kwi-RSS feed okanye ikhonkco kwenye indawo, funda into, emva koko uhambe. Inqaku elijolise ngakumbi kwindawo yakho, inqanaba lokuncipha elincinci linokubaluleka.
Ungazibona njani iibhotile kunye namathuba aphosiweyo
Enye yezona zinto zibalaseleyo onokuzenza ngomgangatho wokundwendwela kukufumana iibhotile okanye amathuba aphosiweyo kwindawo yakho: ezizezi, iindawo apho uninzi lweendwendwe ezinokuthi zibe ngabathengi ziye ziphele zishiya okanye ziye emfundweni.
Jonga kwingxelo yomxholo ebonisa uluhlu lwamaphepha kunye nexesha elichithwe kwiphepha ngalinye kunye nenqanaba lokuhlawula.
Jonga umba 8? Ine-93.73 yeepesenti yenqanaba lokuhlawula. Oko akusoloko kungumqondiso ombi. Ukuba abafundi abaninzi bafumana indlela yabo kweli phepha kwezinye iiblogi, banokufunda ngokulula kwaye baqhubeke.
Nangona kunjalo, naliphi na iphepha elineshumi eliphambili kwindawo yakho elichitha ngaphezulu kweepesenti ze-90 zabakhenkethi kusenokwenzeka ukuba likubize ngamathuba axabisekileyo. Ewe unokuba nenqanaba lokubhabha elibi, kodwa ukuba uyazi malunga nayo, unokwenza okuthile ngayo. Unokongeza amanye amakhonkco kwamanye amanqaku, umzekelo, okanye ujonge ukuba into ephepheni iqhuba iindwendwe.
l-glutamine Iziphumo ebezingalindelekanga kwikliniki ye-mayo
uyiseta njani kwakhona ilaptop yam
Umthamo we-zoloft 25 mg
ngaphaya kwekhawuntari ephedrine